Tendrombohitra Jizera - PetrPikora.com
Giant Mountains (Valan-jiolahy alemà, Poloney Góry Izerskie, janga antsoina hoe Jizerky) dia totalin'ny geomorphological sy ny tendrony avo indrindra any amin'ny Repoblika Tseky. Nantsoina hoe Reniranon'i Jizera ilay tendrombohitra, izay mitsambikina eo anelanelan'ny Smrk, tendrombohitra avo indrindra any amin'ny faritra atsimon'i Tseky. Noheverina ho tandrefana andrefan'ny Tendrombohitra Giant. Ny ampahany manan-danja dia hita any Polonina, izay toerana avo indrindra amin'ny Tendrombohitra Jizerské no Wysoka Kopa (1126 m).
Around-tendrombohitra sady tanànan'i Liberec, Frydlant, Raspenava, New Town ambany kesika, Świeradów-Zdroj, Szklarska Poreba, Desna, Tanvald sy Jablonec nad Nisou. Faritany eo amin'ny fitantanana ny Czech ampahany eny an-tendrombohitra miorina ao amin'ny distrika ny Liberec, Jablonec nad Nisou sy Semily Liberec faritra.
Pro Giant Mountains dia toetra namongotra ao amin'ny tampon'isan'ny faritra, dia toy izany no mamorona lembalemba avo-mandainga izay mitsangana granita tampon'isa sy izay fahaketrahana ny marivo misy maro, fotaka.
Giant Mountains flank ireto vondrona geomorphological (avy any avaratra araka ny manaraka ny fihodin'ny famantaranandro) Frýdlantská tani-hay, Kotlina Jeleniogórska, Giant Krkonošské ještěd-kozákov lemaka amoron-tsiraka sy Žitava tandavan tavy. Ireo vondrona manodidina (afa-tsy ny Tendrombohitra Giant) Giant Mountains nisaraka. Ohatra, ny avaratra hantsana Frydlantske uplands, eny, nifoha ambony lohasaha Smědá manana havana haavony 500 m. Avaratra miakatra toy ny Jizersky avo ambonin 'ny lohasaha sy ny tandavan Kwisa Kamienna Small. Na dia mandalo ny tendrombohitra atsimo hampandeha tsara ho any an-Liberec Basin Izy fa efa mihidy 18 km ela Ridge Černostudniční.
Ny Jizera tendrombohitra tanteraka ny 28 arivo (tampon'isa amin'ny haavon'ny 1000 metatra mahery sy ny laza maherin'ny 5 metatra). Misy loharanom-baovao tsy mbola White fahafatesana (1007 m) mandry eo pigeonloft sy Montenegro millirem (m 1003) miorina atsimon'i Jizera na kesika, kely fotsiny ao ambadiky ny tampon'isan'ny Smrku poloney-Czech sisintany. Mifanohitra amin'izany, ny sasany Hoy ny Świeradowiec, Kanefa ity dia miavaka tendrombohitra, afa-tsy spočinek Lužce.
Ao amin'ny Czech anatin 'ny tendrombohitra dia hita 15 arivo sy ny ankamaroan'izy ireo dia nofaranan'ny paikady amin'ny endrik'ireo vato miavaka. Izy ireo koa tena lalina seza - 7 ireo manana toerana ambony (isam-ponina avy amin'ny seza), fara fahakeliny, 100 m. Ny poloney anjara dia 13 arivo amby iray alina, anisan'izany ny ambony indrindra Wysoka kopa, ny endrika, na izany aza, dia tsy mitovy, vatolampy endrik'ireo dia mainka, ny tendrombohitra ny ankamaroany dia fisaka pates ary lasely tonta. Ankoatra ny Wysoke Kopy, tsy misy tampoka kokoa noho ny 60 metatra ny haavony.
Ny latabatra manaraka dia mirakitra ny halaviran-tampony an'habakabaka an'arivony, ny fahamboniana ary ny fisarahana. Mahaliana fa i Jizera dia manana toerana ambony kokoa noho i Smrk, tendrombohitra avo indrindra ao amin'ny faritra Czech avy any an-tendrombohitra. Mifanohitra amin'izany kosa, i Smrk dia manana toerana ambony kokoa noho i Wysok Kopa, tendrombohitra avo indrindra amin'i Jizera manontolo. Ny fanintelony iray hafa dia ny lokan'ny Černý vrch, izay misy ny 1026 m to 17. avo indrindra, nefa ny 4. ny iray arivo amby iray alina amin'ny Jizera.
Tamin'ny faran'ny proteôsoikin'ny alikena Assynth, dia nisy havoana goavambe novolavolain'ny fampijaliana sy ny tsy fitoviana tao amin'ny faritry ny Tendrombohitra Jizera ankehitriny. Na izany aza, nandritra ity taon-jato 200 manaraka ity, io tendrombohitra io dia saika nifangaro, ary tao Siluriana, io faritra io dia natondron'ny ranomasina. Nandritra io vanim-potoana io, dia nisy ploton-droa, izay mametraka ny fototry ny tendron'ny tendrombohitra, nipoitra tampoka. Ny basilika dia niorina tao anaty andian-tsokona iray tamin'ny alàlan'i Kaleon. Ny endriky ny fanampiana androany dia novolavolain 'ireo dingana anankiroa hafa: Hercynian folding sy ny hetsi-bahoaka ao Tertiary. Tamin'ity vanim-potoana ity dia nisy ny fiatoana Giant Mountains asandratra. Nihabetsaka ny ravina voamaina, ohatra, teo amin'ny tongotra avaratry ny lalaon'ny Špičák, Ořešník, Frýdlantské.
Ny vatam-panjakan'ny ankamaroan'ny androany dia vato granita - granita. Nipoitra izy ireo tamin'ny alalan'ny fampisehoana roa tonta. Avy granita ireo vatana dia Lausitz pluton be taona, izay mitohy any an-tendrombohitra any amin'ny faritra avaratrandrefan'i ny antsoina hoe Rumburk granita. Nandritra ny nanamafy pluton niova fo io hafanana be taona tsindry sy ny vatolampy - solaitra - amin'ny schist dia ohatra, esory Mika tendrombohitra teo avaratra atsinanan'ny. Amin'izao svor posterior ny mineralization (mipetraka ny vifotsy ao amin'ny New Town kesika eto ambany), ary tatỳ aoriana nijininika ny mineraly loharano (Libverda, Czerniawa Zdrój Świeradów-loharanom-baovao). Ny vatosokay sy ny dolomites mamorona ny Vapenny vrch ao Raspenava dia niova ho marbra. Ny vatany tena niova dia ny Jizera ny toerany izay mamorona ny Hôpitaly ambony amin'ny Jizera sy ny Mountain Smrk. Ambony ny tanàna vaovao dia misy ny fametrahana fonosana iray hafa - leptinate. Ny vato miovaova koa dia ny shale vy sy kwarza (Rock White ao Příchovice).
Ny faharoa, Plombon Krkonoše-Jizerská dia faritra manodidina an'i Chrast ka Sněžka. Nalaina ny karboniana ary ny granita no mamolavola ny ankamaroan'ny fanorenana vato Jizerskohorské. Any amin'ny havoana tertiary, loharano loharano no nampiana, indrindra fa basalt. Ny vatam-bazala goavana indrindra dia Bukovec nad Jizerkou sy Buková akaikin'i Jiřetín. Nandritra ny vanim-potoana, ny Tendrombohitra Jizera dia tsy nijanona afa-tsy teo amin'ny toerana ihany, nitsahatra ny lozolika kontinanta tany amin'ny taniny avaratra. Na izany aza, dia nisy fiantraikany tamin'ny ranomandry teo amin'ny Tendrombohitra Jizera. Noho ny toetr'andro mafana dia nisy ny sampana toy ny jiro sy ny rindrina. Ny fanorenana vatosoa hafa mahaliana ao amin'ny faritry ny tendrombohitra dia ny vatolampy, ny vikanta ary ny vatolampy.
Misaotra ny toerana misy azy ireo ny Tendrombohitra Jizera manana tamberin-java-maneno goavambe. Ny sisin'ny tendrombohitra dia manasaraka ny Ranomasina Baltika sy ny Ranomasina Avaratra. Avy any andrefana sy atsimoandrefana, ny rano avy amin'ny Lužická Nisa dia mamakivaky ny dobo Zittau mankany amin'ny Ranomasina Baltika. Ny iray amin'izy ireo dia Směda, mandoaka ny avaratry ny tendrombohitra. Zava-dehibe hafa koa ny Jeřice, Řasnice ary Lomnice. Eo amin'ny faritra poloney, misy renirano lehibe Bobr, Kamienna ary Kwisa. Ny atsinanana sy atsimo-atsinanan'ny faritra dia ripaky ny Jizerou mankany amin'ny Elbe ary toy izany hatrany amin'ny Ranomasina Avaratra. Ny ampahany lehibe indrindra aminy dia i Kamenice.
Ny tohodrano tondra-drano dia manan-danja lehibe amin'ny fitondràn'ny rano. Ny tora-pasika tora-pasika, izay toeram-pambolena avo lenta, dia afaka mitana ranon-drano goavana ao anaty sela - avo roa heny ny lanjany. Izany dia misy fiantraikany amin'ny fiverimberenana sy ny fanamainana ny fiompiana maraokana. Mandritra izany fotoana izany koa dia mihazakazaka ny fahatongavan'ny lohataona.
Ny sampana voajanahary voajanaharin'ny Tendrombohitra Jizera dia dobo sy dobo. Amin'ny faran'ny 19. Taonjato maro dia kely ihany, natsangana fanamboaran-drano izay natsangana tany an-tendrombohitra mba hanatontosana ny labozia sy ny vera. Taorian'ny tondra-drano nahatsiravina nataon'ny 29. 7. 1897, rehefa be dia be ny fisalorana tao amin'ny Jizerské hory, dia nanapa-kevitra ny hiaro ireo tohodrano hafa mba hiarovana amin'ny hetsika hafa. Fa vao nametraka ekipa fanorenana fiaraha-monina rano ny renirano tsy fampindramam dalàna sy ny fananganana ny tohodrano ao amin'ny tavy Zhořelecká Nisa Noforonin'Andriamanitra ny Profesora Otto Intze enina tohodrano. Izy io no tohodrano lehibe voalohany tao amin'ny Repoblika Tseky, izay nahatonga koa ny ahiahiny tamin'ny vanim-potoana. Farany, dimy tamin'ireo tohodrano mavesatra ireo no natsangana, ary tsy vita ny fananganana ny tohodrano tao Jeřice. Ny toeram-pamokarana Harcov, ny renivohitr'i Bedřichov, ny Mníšecká Dam, ny Mlýnická Dam ary ny Jablonecká Dam. Fitaterana roa hafa - natsipy tamin'ity indray mandeha ity - tao amin'ny faritra Xizum no nahavita ny toeram-pambolena tao Jizera. Ny iray tamin'izy ireo, tohodrano iray tao White Desna, dia nipoaka ny herintaona taty aoriana. Ny faharoa, Souš Reservoir, ankehitriny dia loharano fisotro rano ho an'i Jablonec nad Nisou. Ny loharanon'ny rano ho an'ny Liberec sy Avaratra no (indray embankment tohodrano) drano Josefuv Dul, naorina teo 1915-1976.
Ny drafitry ny Minisiteran'ny Fambolena ao amin'ny Repoblika Tseky dia ahitana rafitra telo misaraka telo sy telo ao akaikin'i Hejnice. Na dia izany aza, araka ny hevitra maro, dia tsy misy antony tokony hanorenana azy ireo, ary koa ny tondradrano sy ny fiovàna goavana amin'ny faritra voaaro amin'ny tendrombohitra.